Naya Post Nepal | बिहे पछिको प्रेम – सरिना सापकोटा
बिहे पछिको प्रेम – सरिना सापकोटा
रातिको ११ वजेको थियो । मेरो मोबाइलमा घण्टि बज्यो । नचिनेको नम्बर, के गरौं गरौं भयो । रातिको फोन सुत्ने बेलामा कस्ले ग¥यो होला मनमनै विचार गरे अनि फोन रिसिभ गरे । हलो आमा तपाईकी छोरी भोली आएर तपाईसगै लैजानु यति भन्दै ज्वाई रु’न थालेको मखमलीले बताईन् ।
मखमलीको छोरीले बिहे गरेको पनि ५ वर्षपूरा भएर ६ मा दौडीरहेको छ । यतिका वर्षपछि पनि आºनी छोरीले ज्वाईमाथि गरिब र कु’रुपको कारण छोड्न लागेको मखमलीले थाहा पाईन । भोलीपल्ट विहान छोरीलाई फोन गरेर छोरीको घरमा गइन् । छोरी ज्वाईलाई सगै राखेर स–विस्तारमा कुरा सोधिन मखमलीले ।
छोरीले सारा आ रो प माथि प्रत्या रोप लगाउदै भनिन् किन विहे गरीस् ? हेर्दै ड’रलाग्दो तलाई किन चाहियो बच्चा ? तैले मलाई पाल्न सक्दैनस् कसरी पाल्छस् बच्चा ? अब मेरो लायक भैनस हो यस्ता–यस्तै शब्दको प्रहार गरीन उनले आºनो लोग्नेलाई । मखमलीले छोरीलाई चुप लगाउदै भनिन् ‘लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आ’गो’ यस्तो नबोल्न भन्दै माइत ल्याईन र ज्वाई श्रीमतीको यस्तो कुरा सुनेर ट्वाल्ल परेर हेरिरहे ।
मखमलीका ज्वाई सरकारी कार्यालयका कर्मचारी थिए । उनको तलबले “भोकै मर्न दि“दैन रमाउन पुग्दैन” भने जस्तै थियो । सौन्दर्यता भनेको मानिसको हेर्ने नजर हो । जसमा समय र परिस्थति अनुसार मानिसको हेराईमा भर पर्दछ । यसमा मखमलीका ज्वाईको के दोष ? बिहे अघि मखमलीकी छोरीलाई सबै कुरा राम्रो लागेको थियो तर बिहे गरेको यतिका समय पछि उनलाई सबै नराम्रो लाग्न थाल्यो । जुन असोभाविक कुरा थियो ।
ज्वाईले आºनो पोस्टि¨ इलाम हु“दा आफुस“गै श्रीमती लगी करिब १ वर्ष स“गै रमाएका थिए । त्यति बेला इलाम पोस्टि¨ हु“दा श्रीमतीले मलाई घरगर्न र आमा सिहार्न गाह्रो भयो । घरमा पनि त दिदी हुनुहुन्छ । अब यतिका समय मैले गरे अब दिदीले हेर्नु हुन्छ, म पनि स“गै जान्छु भनेपछि उनले लगेका रहेछन् ।
हेर्दा सुन्दर देखिने क्ष्ँणिकको संसारमा आखिर के नै अमर रहेछ र ? का“चको टुक्रा जस्तै एकै पलमा झ¥याम–झुरुमै फुट्यो मखमलीका ज्वाईको सपना । केही समयको अन्तरालमा श्रीमतीले यहा“बसेर घर खर्च बढी भयो । भोलीको लागी केही भएन यस्ता यस्तै कुराले श्रीमानको मन पगालीन् र बहाना बाजी गर्दै घर फर्कीन् । यसरी घर आएकी श्रीमतीको अचानक स्वभाव परिवर्तन हुन थाल्यो ।
कारण थियो, इलाममा रहदा रोजगारीको सिलसिलामा दुबै गएका एक युवकसगको प्रेम । यो कुरा उनकी साथी तर नाताले जेठानीले बताईन् । आफु पर पुरुषको प्रेममा परेर लोेग्नेलाई गरीब र कुरुप देख्नु मखमलीकी छोरीको लागि सामन्य कुरा थियो । सामान्यतयः हाम्रँे गाउघरमा रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर गएकाका श्रीमतीले छाडेर गएको धेरै उदाहरणहरु छन् । अहीले मखमलीकी छोरीको भने सरकारी कर्मचारी, माईती र घर दुवै छोडी काठमाडौंमा डेरा गरी वैदेशीक रोजगारमा गएका आºना प्रेमीलाई कुरीरहेकी छन् ।
फेसबुेके मायाको अन्योल्तामा आºना प्रेमीलाई कुरी रहेकी मखमलीकी छोरीको प्रेमले के सार्थकता पाउ“ला त ? कयौं यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरु हाम्रो समाजमा नभएका भने होइन्न । यसरी जीवन गुजाराका लागि वैदेशिक रोजगारीमा वा घर छाडेर अन्यत्र जानेहरुको घर परिवारमा आउने आन्तरिक समस्याका घटनाहरु पछिल्लो समय बढिरहेको छ ।
विदेशमै छ“दा घरमा रहेकी श्रीमतीमाथि गरिने शंकाउपशंका होस् या त वैदेशिक रोजगारीमा जानेका श्रीमतीहरु बालबच्चा छोडेर अर्कैस“ग विवाह बन्धनमा बाधिएका घटनाहरु आमसञ्चार माध्यममा धेरै आउने गरेका छन् । धन्न, मखमलीकी छोरीको भने कुनै सन्तान थिएन । नत्र बाबु आमाको बेमेलको सजायको भागीदारी उनीहरु हुने थिए । त्यसैले बिहे पछिको प्रेमले वैदेशिक रोजार, सरकारी जागीरे र उनीका श्रीमती यि तिनै जनाको भविष्य अन्यौल देखिन्छ ।
लेखक :- सरिना सापकोटा
२०७८ माघ २२, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 401 Views